Itinye n'ọkwa Ọkụ na-emeso Usoro Mkpa-Gini bụ ọgwụgwọ na-ekpo ọkụ
Kedu ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-emeso usoro elu?
Ugbo oku bụ usoro ọgwụgwọ ikpo ọkụ nke na-enye ohere ikpo ọkụ nke ezubere iche site na njikọta electromagnetic. Usoro a dabere na mmiri eletrik na-emetụta n'ime ihe iji mepụta okpomọkụ ma bụrụ usoro kachasị mma iji jikọta, mee ka ọla ma ọ bụ dị nro ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-eduzi. Na usoro nhazi nke oge a, ụdị ọgwụgwọ a na-enye ọkụ na-enye ọnụọgụ bara uru nke ọsọ, nkwụsi ike na njikwa. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ ndị a maara nke ọma, ọganihu ọgbara ọhụrụ na teknụzụ steeti siri ike emeela ka usoro a dị mfe, usoro kpo oku na-efu ọnụ maka ngwa nke gụnyere isonye, ​​ịgwọ, ikpo ọkụ na nnwale ihe.
Itinye ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, site na iji njikwa ọkụ eletrik na-ekpo ọkụ nke ukwuu, ga-enye gị ohere ịhọrọ njirimara anụ ahụ kachasị mma maka ọ bụghị naanị akụkụ igwe ọ bụla-kama maka akụkụ ọ bụla na akụkụ ọla ahụ. Hargba ume na-eme ka ike ịkụnye ume dị elu iji na-ebu akwụkwọ akụkọ na akụkụ dị n'akụkụ na-enweghị ịchụ àjà dị mkpa iji rụọ ọrụ dị egwu na ịma jijiji. Nwere ike ime ka elu dị n'ime na oche valvụ n'akụkụ dị mgbagwoju anya na-enweghị ike ịmepụta nsogbu. Nke a pụtara na ị nwere ike ime ka obi sie ike ma ọ bụ gbakwunye ebe a kapịrị ọnụ maka ịdịte aka na ductility n'ụzọ ga-akacha enyere gị aka.
Uru nke Mmepu Okpomọkụ Na-emeso Ọrụ
Gbado anya Okpomọkụ Na-emeso Ojiji nke ihu na-ejigide eriri nke mbụ ma na-eme ka ebe dị elu nke akụkụ ahụ sie ike. A na-achịkwa mpaghara ahụ siri ike n'ụzọ ziri ezi n'ihe gbasara ịdị omimi, obosara, ọnọdụ na ike.
Kwesịrị Ekwenye Wepụ ihe ndị na-ekwekọghị ekwekọ na okwu njiri mara ya na ire ọkụ mepere emepe, ọwa ọkụ na ụzọ ndị ọzọ. Ozugbo usoro a na-ọma calibrated na melite, e nweghị maa ọrụ ma ọ bụ mgbanwe; usoro kpo oku a na-emegharị ma na-agbanwe agbanwe. Na usoro usoro ihe siri ike nke oge a, njikwa ọnọdụ okpomọkụ na-enye nsonaazụ edo.
Mmụba dị ukwuu Enwere ike ịbawanye ọnụego mmepụta n'ihi na a na-emepụta okpomọkụ ozugbo na ozugbo (> 2000º F. na <1 abụọ) n'ime akụkụ. Mbido bụ ozugbo ozugbo; enweghị ikpo ọkụ ma ọ bụ wetuo obi dị mkpa.
Mma Ngwaahịa Akụkụ anaghị abata ozugbo na ọkụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ; a na-eme ka ikpo ọkụ ahụ n'ime akụkụ ahụ n'onwe ya site na ịgbanye ọkụ eletrik ọzọ. N'ihi ya, a na-ebelata ngwa ahịa ngwaahịa, ntụgharị na ịjụ ọnụego.
Oriri Ike Etu Ike agwụla gị ịkwụ ụgwọ ọrụ ịba ụba? Nke a pụrụ iche ike-rụọ ọrụ nke ọma usoro atọghata ruo 90% nke ume tinyere ume n'ime uru okpomọkụ; ogbe oku bụ n'ozuzu naanị 45% ike-oru oma. Enweghị usoro ikpo ọkụ ma ọ bụ nke dị jụụ achọrọ ka a na-ebelata nkwụfu ọkụ na-ebelata ntakịrị.
Uda gburugburu ebe obibi Thegba mmanụ ọkụ nke ala ọdịnala adịghị mkpa, na-ebute usoro dị ọcha, nke anaghị emetọ nke ga-enyere aka ichedo gburugburu ebe obibi.
Ọkụ na-egbuke egbuke bụ Usoro ịkpọ oku na-enweghị kọntaktị nke ahụ, nke na-enweta ike site na Field Magnet Field, nke Induction Coil (Inductor) mepụtara.
E nwere usoro abụọ nke ike ume:
ọgbọ nke nso-akaghị (eddy) okwukwo n'ime ahụ nke na-akpata kpo oku n'ihi nguzogide eletriki nke ihe aru
hysteresis kpo oku (maka ihe magnetik Naanị!) N'ihi esemokwu nke magnet micro mpịakọta (ngalaba), nke na-agbagharị na-eso usoro nhazi nke oghere ndọta
Cikpụrụ nke ịkụ ọkụ ọkụ
Chain nke ihe ịtụnanya:
Itinye n'ọkwa kpo oku ike ọkọnọ anapụta ugbu a (I1) na ntinye eriri
Ihe mkpuchi igwe (ampere-ntụgharị) na-emepụta oghere magnetik. A na-emechi usoro ahịhịa (iwu nke okike!) Na ahịrị ọ bụla na-agagharị na isi iyi dị ugbu a - eriri igwe na workpiece
Ọnọdụ magnetik ọzọ na-agafe n'akụkụ akụkụ obe (yana akụkụ ahụ) na-adọta voltaji na akụkụ ahụ
Voltaji na-eme ka mmiri na-asọpụta (I2) n'akụkụ nke na-agagharị na ntụpọ na-abụghị nke eriri igwe ebe enwere ike
Osimiri Eddy na-emepụta okpomọkụ na akụkụ ahụ
Ike Ike na ntinye nrụnye ọkụ
Uzo ozo na-agbanwe uzo abuo n'oge uzo obula. Ọ bụrụ na ugboro bụ 1kHz, ugbu a gbanwere ụzọ 2000 ugboro na nkeji.
Ngwaahịa nke ugbu a na voltaji na-enye uru nke ike ozugbo (p = ixu), nke na-agbanye n'etiti ike na eriri igwe. Anyị nwere ike ịsị na ike na-etinye obi gị dum (Ike ọrụ) yana igwe na-egosipụta (Reactive Power) site na eriri igwe. A na-eji batrị Capacitor ebutu generator na ike reactive. Ndị na-arụ ọrụ na-enweta ike na-arụ ọrụ site na eriri igwe ma zipụ ya na igwe na-akwado oscillations.
A na-akpọ circuit "coil-transformer-capacitors" Resonant ma ọ bụ Tank Circuit.
Categories FAQ, Technologies Tags ịgwọ ọkụ, okpomọkụ na-emeri itinye n'ọkwa, ọrụ ikpo ọkụ, ọgwụgwọ okpomọkụ, ọgwụgwọ kpo oku, HF okpomọkụ na-emeso, akwa ugboro okpomọkụ na-emeso, akwa ugboro okpomọkụ ọgwụgwọ, ọkụ ọkụ na-emepụta ihe, itinye n'ọkwa usoro ọgwụgwọ ọkụ, elu okpomọkụ n'imeso, elu kpo oku ọgwụgwọ Mail igodo